भागीरथी र हत्याराकाे नाता के हाे ? त्याे दिन हत्या याेजना कसरी गरे ? कहालीलाग्दो बयान सहित « Janasahara
भागीरथी र हत्याराकाे नाता के हाे ? त्याे दिन हत्या याेजना कसरी गरे ? कहालीलाग्दो बयान सहित
फागुन ५ बैतडी – गत माघ २१ गते बलात्कार पछि हत्या गरिएकि दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा १७ वर्षीय दिनेश भट्ट पक्राउ परेका छन्।
अनुसन्धानमा खटिएका सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदीका अनुसार भागरथीको छिमेकीसमेत रहेका दिनेशलाई घटना भएको १३ औँ दिनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले आफ्नो उमेर १७ वर्ष बताएका छन्। तर प्रहरीले भने विद्यालय अभिलेखमा भएकाे उनकाे जन्म मिति अनुसार यकिन हुने र यदि नबालक भए र सुधार गृह पठाउने बताएको छ। दिनेश र भागरथीबीच नाता पर्छ। नातामा उनी भागरथीको भाइ हुन्।
हत्या स्वीकार गरेका दिनेशले आफूले बलात्कार नगरेको बयान दिएकाा छन। घटना २१ गते दिउँसो २:४० देखि २ बजेर ४७ मिनेटको बीचमा भएको बताइएको छ। अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी अनुसन्धानकाे अनुमान छ।
एउटै विद्यालयमा भागरथी कक्षा १२ मा पढ्थिन् भने दिनेश कक्षा ११ मा पढ्थे। दिनेशको कक्षा सकिने समय ३ बजेर १५ मिनेटमा हुाे भने भागरथीको २ बजेर ३० मिनेटमा। हत्याकाे त्याे दिन माघ २१ गते दिनेश २ कक्षा छाडेर हत्या गर्नकै लागि बाटोमा कुरेर बसेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
​सुरुमा दिनेशले आफू स्कुल बिदा भएपछि मात्रै घर गएको बताए पनि पछि भने छिटो निस्किएको स्वीकार गरेको प्रहरी अनुसन्धानले बताउँछ। उनी कक्षा सकिनु भन्दा करिब डेढ घण्टा पहिले नै भागरथीलाई पर्खिन विद्यालयबाट हिडेकाे बुझिएकाे छ।
दिनेश भन्छन ‘म बाटोमा पहिल्यै बसेको थिएँ। भागरथी दिदी चाउचाउ खाँदै आउँदै थिइन्। सुरुमा मैले उनको किताब फालेँ। त्यसपछि उनलाई पनि पछाडिबाट धक्का दिएँ। उनी लडेर बेहोस भइन् अनि घाँटी थिचेर मारेँ।’
उनले भागरथीलाई लडाएर बेहोस बनाएपछि बलात्कार गर्न खोजेको भने बयानमा स्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएकाे छ। बलात्कारको प्रयास गरेको तर नगरेको बयान दिएका छन। हत्यापछि आफैँले भागरथीको मोबाइलको ब्याट्री झिकेर फालेर त्यसपछि उनी त्यहाबाट गएको बताएका छन। त्यस यता नियमितरुपमा विद्यालय समेत गइरहेका थिए। उनले बलात्कार नगरेकाे बताए पनि पाेष्टमाटम रिपोर्टमा भने बलात्कार पछि हत्या भएकाे देखिएको छ।
भागरथीकाे हत्यारा पक्राउ, बुवाकाे रिसले छाेरीमाथि बलात्कार गरेकाे बयान
भागरथी बलात्कारीकाे नजिक पुग्दै प्रहरी,निर्मला हत्याअनुसन्धानकाे टाेलीले नै अनुसन्धानमा